Agụperoxidase Na-ahụ Maka Ihe Na-ahụ Maka Ihe Ndị Na-ahụ Maka Ihe Na-ahụ Maka Ntanetị: Ọrụ, Sistem, Ngwa & Nchekwa Ngwurugwu Shangke
Ihe nnọchianya nke ọgwụ antibacterial eke bụ Lactoperoxidase: Ọrụ, Sistem, Ngwa & Nchedo
Lactoperoxidase (LPO), nke a na-ahụ na gland na mammary, bụ ihe dị oke mkpa na nzaghachi mgbochi ọrịa dị mkpa iji nọgide na-enwe ahụike dị mma. Ọrụ kachasị mkpa nke lactoperoxidase bụ oxidize ionioyanyan ion (SCN−) nke a na-ahụ na mmiri n'ihu hydrogen peroxide nke na-ebute ngwaahịa ndị na-egosi ọrụ mgbochi. LPO nke a hụrụ na mmiri ara ehi ka etinyere n'ọrụ ahụike, nri, na ụlọ ọrụ ịchọ mma n'ihi ọrụ ya na nhazi ya na enzyme mmadụ.
A na-eji ngwaahịa lactoperoxidase mee ka ihe dị ọcha ọnụ a na-eme ọnụ iji mee ka ọmarịcha ihe dị mma na ọkọlọtọ fluoride. N'ihi nnukwu ihe nke mgbakwunye lactoperoxidase, ihe a na-achọ amụbawo nke ukwuu n'ime afọ ndị a, ọ ka na-etokwa.
Gịnị bụ Lactoperoxidase?
Lactoperoxidase bụ naanị peroxidase enzyme nke a na-emepụta site na gland mucoal, mammary, na salivary, nke na-arụ ọrụ dị ka ihe na-ahụ maka ọgwụ nje. N'ime mmadụ, enwetara lactoperoxidase enwetara site na mkpụrụ ndụ LPO. A na-ahụkarị enzyme a na anụmanụ, gụnyere ụmụ mmadụ, ụmụ oke, bovine, kamel, atụ, ehi, ewu, Ilama, na atụrụ.
LPO bu ogwu eji aru oru nke oma. Ya mere, a malitere iji lactoperoxidase dabere n'ụkpụrụ a. Ngwa Lactoperoxidase bụ nke achọpụtara site na nchekwa nri, usoro ọgwụgwọ ophthalmic, na ebumnuche ịchọ mma. Ọzọkwa, ejirila lactoperoxidase mee ihe na ọnya na ọgwụgwọ eze. Ọzọkwa, LPO bụ ihe na - arụ ọrụ mgbochi nje na mgbochi mgbochi. A tụlere n'okpuru ebe a bụ ihe ndị ọzọ lactoperoxidase:
i. Ọrịa ara
Ọrịa cancer Lactoperoxidase A na-ejikọta ikike njikwa ya na ikike nke oxidize estradiol. Nzuzo a na - eduga na nchekasị nke oxidative na sel kansa. Ọrụ Lactoperoxidase dị ebe a bụ ime ka mmeghachi omume mmeghachi omume na-eduga na oriri oxygen na mkpokọta hydrogen peroxide intracellular. N'ihi mmeghachi omume ndị a, LPO na-egbu mkpụrụ ndụ tumo na vitro. Ọzọkwa, macrophages ekpughere LPO na-arụ ọrụ ibibi mkpụrụ ndụ cancer, na-egbu ha.
ii. Mmetụta na-egbochi nje
LPO enzyme na - arụ ọrụ dịka ihe eke sitere n'okike na - alụso ọrịa anụmanụ ọgụ, ọ na - ejikwa ọidụ nke thiocyanate ion na antibacterial hypothiocyanate. LPO nwere ike igbochi uto nke obere microorganisms site na mmeghachi omume enzymatic nke metụtara ion thyancyanate na hydrogen peroxide dị ka cofactors. Ọrụ antimicrobial nke LPO bụ usoro nke etolite hypothiocyanite site na mmegharị nke enzymes. Hypothiocyanite ion na-enwe ike imeghachi azụ na nje dị na nje. Ha na-ebute ọgba aghara na arụmọrụ nke enzymes metabolic dị iche iche. Lactoperoxidase na-egbu nje Gram-na-adịghị mma ma gbochie uto na mmepe nke nje nje-Gram.
iii. Lactoperoxidase na ihe ntecha
Nchikota lactoperoxidase ntụ ntụ, glucose, thiocyanate, ayodiin,
na glucose oxidase, a makwaara na ọ dị irè na ichebe ịchọ mma.
iv. Lactoperoxidase na mmiri ara ehi ichebe
Ike nke lactoperoxidase na mmezi nke mmiri ara ehi dị ọcha ka nke ehibere maka oge enyerela n'ọtụtụ ebe yana ọmụmụ ihe emere n'ọtụtụ ala. Enwere ike iji ọgwụ nchekwa Lactoperoxidase chekwaa mmiri ara ehi na-esite na ụdị dị iche iche. Odi otu esi aru oru a dabere na otutu ihe. Ihe ndị a gụnyere ọnọdụ mmiri ara ehi n'oge ọgwụgwọ, ụdị mmerụ microbiological, yana ego mmiri ara ehi.
Lactoperoxidase nwere nsonaazụ nje na mmiri ara ehi ara. Nnyocha nyocha na ahụmịhe sitere na ezigbo omume na-egosi na enwere ike iji lactoperoxidase gafere oke okpomọkụ nke (15-30 Celsius) nke e zoro aka na ntuziaka codex nke 1991. Na njedebe nke ogo okpomọkụ, nyocha dị iche iche gosiri na ịgbalite lactoperoxidase. pụrụ igbu oge nje mmiri ọgwụ psychrotrophic ma si otú a na-egbu mmiri ịilaụ mmiri ara ehi ruo ọtụtụ ụbọchị ma e jiri ya tụnyere friji naanị. Ọ dị mkpa ịmara na ebumnuche iji lactoperoxidase abụghị iji mee ka mmiri ara ehi bụrụ ihe ọ forụ forụ maka oriri kama ọ bụ ichekwa ogo mbụ ya.
Hygienemalite ịdị ọcha dị na mmepụta nke mmiri ara ehi dị oke mkpa maka lactoperoxidase na ịdị mma microbiological. A ga-enweta nchekwa na ịdị ọcha nke mmiri ara ehi site na nchikota ọgwụgwọ ọkụ nke mmiri ara ehi na ezigbo ịdị ọcha ọcha n'enweghị iji lactoperoxidase.
v. Ọrụ ndị ọzọ
Nnyocha e mere egosiwo na mgbakwunye na inwe mmetụta antiviral, Lactoperoxidase nwekwara ike ichebe mkpụrụ ndụ anụmanụ site na mmebi na peroxidation dị iche iche, ọ bụkwa akụkụ dị mkpa nke usoro nchebe iji gbochie microorganisms pathogenic na usoro nri nke ụmụ amụrụ ọhụrụ.
Kedu ihe bụ usoro Lactoperoxidase?
Usoro lactoperoxidase (LPS) mejupụtara ihe atọ mejupụtara, nke gụnyere lactoperoxidase, hydrogen peroxide, na thiocyanate (SCN¯). Usoro Lactoperoxidase nwere ọrụ mgbochi nje naanị mgbe ihe atọ ndị a na-arụkọ ọrụ. N'ihe eji eme ihe n'ezie, ọ bụrụ na itinye uche n'ihe ụfọdụ na sistemụ ezughi oke, a ga-etinye ya iji jide n'aka na nje na-egbochi nje, nke a maara dị ka LPS activation. N'ime ha, itinye lactoperoxidase ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị 0.02 U / mL.
Oke lactoperoxidase eke na mmiri ara bovine bụ 1.4 U / mL, nke nwere ike gboo ihe a chọrọ. SCN¯ dị n'uju na anụrị nke anụmanụ. Na mmiri ara ehi, ịta nke thiocyanate dị obere ka 3-5 μg / mL. Nke a bụ ihe amachiri maka ọrụ usoro usoro Lactoperoxidase. Ekwuputara na thiocyanate kwesiri iji rụọ ọrụ lactoperoxidase bụ ihe dịka 15 μg / mL ma ọ bụ karịa. Ọ bụ ya mere anyị ji gbakwunye thiocyanate a na-apụ apụ iji rụọ ọrụ sistemụ lactoperoxidase. Ngwunye hydrogen peroxide n'ime mmiri ara ehi, nke gbasapụrụ, bụ naanị 1-2 μg / Ml, na mmegharị nke LPS chọrọ 8-10 μg / mL nke hydrogen peroxide. Ọ bụ ya mere a ga-eji nye hydrogen peroxide n'èzí.
Usoro lactoperoxidase na arụ ọrụ dị mkpa na sistemụ ebumpụta ụwa, ọ nwere ike igbu nje na mmiri ara ehi na mmiri mucosal ma nwee ike ịnwe ngwa ọgwụgwọ.
N’ihe banyere nri na ahụike, a ga-eji mgbakwunye ma ọ bụ ịgbakwunye sistem lactoperoxidase mgbe ụfọdụ maka ịchịkwa nje.
LPS mejupụtara mmepụta nke ọgwụ na-akpata nje site na SCN¯catalysed nke LPO nọ n'ihu hydrogen peroxide. Lactoperoxidase ahụ kwuru antimicrobial ọrụ bụ nke a na-ahụkarị n'ọtụtụ mmiri nke anụ ahụ dịka ihe ọ juiceụricụ afọ, anya mmiri, na mmiri. Ihe abụọ dị mkpa maka usoro antimicrobial, nke bụ hydrogen peroxide na thiocyanate, dị na mmiri ara ehi n'ọtụtụ dị iche iche, dabere na ụdị anụmanụ na nri enyere.
Na mmiri ara ehi ọhụụ, ọrụ antimicrobial adịghị ike ma na-anọ ntakịrị ka awa 2 ebe ọ bụ na mmiri ara ehi nwere naanị ọkwa suboptimal nke hydrogen peroxide na thioncyanate ion. A na - agbakwunye Thiocyanate nke a na - eji ya eme ihe na - eme ka ọ bụrụ ihe elele na - eme ka ọ bụrụ hypothiocyanite
Thiocyanate na-arụ ọrụ dị ka onye na-ejikọ sistemụ maka usoro Lactoperoxidase. N'ihi ya, ọnụọgụ nke oxidized sulfhydryls na mkpokọta onwe ha bụ nke ion nke thiocyanate ma ọ bụrụhaala
Thiol moiety dị
Ike agwụla Thiocyanate
Mmiri ọgwụ hydrogen peroxide dị ugbu a
E tinyebeghị Thiocyanate na amino acid aromat
N'ihi nke a, thiocyanate na-eme ka mmetụta nje mgbochi nke sistemụ lactoperoxidase dị ọhụrụ na mmiri ara ehi. Nke a gbatịrị ndụ nchekwa nke mmiri ara ehi dị n’okpuru ọnọdụ ebe okpomọkụ ruo awa asaa ma ọ bụ asatọ.
Ngwa Lactoperoxidase na-eji
i. Mgbochi Mpempe microbial
A na-ahụta ọrụ mgbochi microbial nke sistemụ lactoperoxidase na nsị nke nje na nje nke ụfọdụ microorganisms hụrụ na mmiri ara ehi. Iczọ nje nje ya na-arụ ọrụ n'ime ìgwè thiol ahụ dị na sel microbial nke mkpụrụ ndụ plasma nke mkpụrụ ndụ na-oxidized. Ihe a rụpụtara na mbibi plasma membrane mebiri emebi nke polypeptides, ion potassium, na amino acid. A na - egbochi mkpụrụ ndụ purines na pyrimidines, glucose, na amino acid site na mkpụrụ ndụ. A na - egbochikwa njikọ DNA, RNA, na protein.
Ọrịa nje dị iche iche na-egosipụta ogo dị iche iche nke sistemụ lactoperoxidase. A na-egbochi ma ọ bụ gbuo nje bacteria na-adịghị mma dịka Salmonella, Pseudomonas, na Escherichia coli. Mkpụrụ ọgwụ nje Lactic acid na Streptococcus bụ ihe mgbochi. Mbibi nke nje ndị a site na usoro lactoperoxidase na-eme ka mwepu ụfọdụ nri, na-egbochi nje ị takingụ ihe oriri, nke a na-eduga na mbelata ma ọ bụ ọnwụ nke nje.
ii. Ọgwụ nke paradentosis, gingivitis, na igbu mkpụrụ ndụ tumo
LPS kwenyere na ọ dị irè n'ọgwụgwọ nke gingivitis na paradentosis. E jirila LPO mee ihe n'ọnụ ọnụ iji belata nje bacteria na-egbu ọnụ na, n'ihi ya, acid na-emepụta site na nje ndị a. Antibody conjugates nke lactoperoxidase na glucose oxidase egosiwo na ọ dị irè iji bibie ma na-egbu mkpụrụ ndụ tumo na vitro. Ọzọkwa, macrophages ekpughere n'usoro lactoperoxidase na-arụ ọrụ iji mebie ma gbuo mkpụrụ ndụ cancer.
Emego omumu ihe omumu di iche iche nke na akowa idi odi nma nke LPS na ntacha eze. Mgbe egosiputara ihie, n'iji uda onodu nnwale, na lactoperoxidase nhicha nwere amyloglucosidase (γ-amylase) nwere mmetụta bara uru na nlekọta ọnụ. Enzymes ndị dị ka glucose oxidase, lysozyme, na lactoperoxidase na-ebugharị ya ozugbo site na ntacha eze na pellicle.
N'ihe mejupụtara pellicle, enzymes ndị a na-arụsi ọrụ ike nke ukwuu. Ọzọkwa, LPS nwere mmetụta bara uru nke igbochi ihe mgbochi ụmụaka mgbe ọ dị ala site na ibelata ọnụ ọgụgụ nke ogige nke microclora mepụtara ka ọ na-eme ka mkpụkọ nke thiocyanate pụta.
Na ndị ọrịa xerostomia, lactoperoxidase nhicha ahụ Ọ ka mma karịa etu eji fluoride toothpaste ma a bịa n’ihe banyere ncheta ncheta. Amaghị itinye ngwa nke LPS na periodontitis na caries. Enwere ike iji ngwakọta nke lactoperoxidase na lysozyme na ọgwụgwọ ọrịa syndrome na-ere ọkụ.
Mgbe ejikọtara LPS na lactoferrin, nchikota a jikoro okikeosis. Mgbe ejikọtara LPS na lysozyme na lactoferrin, LPS na-enyere aka melite akara xerostomia. Ọzọkwa, gels nwere usoro lactoperoxidase na-enyere aka melite akara ọnya ọnya mgbe amachibidoro usoro mmiri n'ihi irradiation.
iv. Hanbawanye na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ
Lactoperoxidase ọrụ antimicrobial na arụ ọrụ dị oke mkpa na sistem. Hypothiocyanite bụ akụrụngwa mmeghachi omume nke ọrụ lactoperoxidase na thiocyanate. A na-emepụta hydrogen peroxide site na protein Duox2 (abụọ oxidase 2). Thiocyanate secretion na ndị ọrịa nwere cystic fibrosis belata. Nke a na-ebute mbelata mmepụta hypothiocyanite antimicrobial. Nke a na - enye aka n'ihe ka ukwuu nke ibute ọrịa ikuku.
LPS na-egbochi helikopta pylori rụọ ọrụ nke ọma. Ma na mmiri mmadụ niile, LPS na-egosi mmetụta mgbochi nje na-adịghị ike. Ndị LPS anaghị alụ ọgụ maka DNA, ọ naghị efe efe. Mana, n'ọnọdụ ụfọdụ, LPS nwere ike bute mgbakasị ụjọ. E gosiputara na LPO na ọnụnọ nke thiocyanate nwere ike ịkpalite cytotoxic na nje nke hydrogen peroxide n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ, gụnyere mgbe H2O2 nọ na njikọ nke mmeghachi omume na oke nke thiocyanate.
Na mgbakwunye, n'ihi akụrụngwa antibacterial ya siri ike ma na-eguzogide oke ọkụ, a na-eji ya dị ka onye na-egbochi nje maka belata obodo ndị nwere nje na mmiri ara ehi ma ọ bụ ngwaahịa mmiri ara ehi ma bụrụ ihe na-egosi mmiri ara. Site na sistemụ lactoperoxidase na-arụ ọrụ, enwere ike ịgbatị ndụ nchekwa nke mmiri ara ehi jụrụ oyi.
Na, hypothiocyanate nke lactoperoxidase mepụtara ka enwere ike iji gbochie nje herpes simplex virus na nje immunodeficiency mmadụ.
Ọ dị mma ahụike mmadụ na anụmanụ?
Afọ iri na ise ọmụmụ ihe dị na mba ndị ka na-emepe emepe ka ndị FAO / WHO JECFA (Kọmitii Ndị Ọkachamara Maka Mmeju Nri) wee nyochaa ma nyochaa ha. Mgbe emechara omumu omimi di omimi, usoro lactoperoxidase na ichekwa mmiri ara ehi site n'aka FAO / WHO JECFA (Kọmitii Ọkachamara na Nchịkọta Ihe Oriri). Ndị ọkachamara kpọkwara ụzọ a dị ka ihe dị mma maka ahụike mmadụ yana nke anụmanụ.
LPS bụ ebumpụta ụwa nke ihe ọricụricụ afọ na ọnya na mmadụ, ma, yabụ, echekwabara mgbe ejiri ya na Usoro Akwụkwọ Ozi Codex Alimentarius. Usoro a anaghị emetụta anụmanụ ọ bụla. Nke a bụ n'ihi na a na-eme ọgwụgwọ naanị mgbe mmiri arapụtara site na akwa.
O doro anya site na mkparịta ụka anyị na sistemụ lactoperoxidase na lactoperoxidase dị irè ma baa ezigbo uru n'ọtụtụ ngwa. Ọ bụrụ na ị na-achọ ime izu oke lactoperoxidase ịzụta maka nyocha ma ọ bụ mmepe ọgwụ gị, lelee anya. Anyị nwere ikike ịhazi iwu lactoperoxidase na obere obere oge enwere ike ma bute ha na US, Europe, Canada, na ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. Alala azụ ịkpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ.
Jantschko, PG Furtmüller, M. Allegra et al., “Redox intermediates of plant na mammalian peroxidases: nnwale transient-kinetic compires of reactivity to indole derivatives,” Archives of Biochemistry na Biophysics, vol. 398, Mba. 1, peeji nke 12-22, 2002.
Tenovuo JO (1985). "Usoro peroxidase na nzuzo mmadụ." Na Tenovuo JO, Pruitt KM (eds.). Usoro Lactoperoxidase: onwu na ihe di omimi banyere ndu. New York: Dekker. p. 272.
Thomas EL, Bozeman PM, Mụọ DB: ​​Lactoperoxidase: usoro na akụrụngwa catalytic. Peroxidases na Chemistry na bayoloji. Edezi ya: Everse J, Everse KE, Grisham MB. 1991, Boca Raton, FL. CRC Press, 123-142.
Wijkstrom-Frei C, El-Chemaly S, Ali-Rachedi R, Gerson C, Cobas MA, Forteza R, Salathe M, Conner GE (August 2003). “Lactoperoxidase na nchedo nke ikuku nke mmadụ”. M. J. Respir. Cell Mol. Biol. 29 (2): 206–12.
Mikola H, Waris M, Tenovuo J: Inhibido nje herpes simplex virus nke 1, nje na-efe efe, na ụdị echovirus 11 nke hypothiocyanite sitere na peroxidase. Antiviral Res. 1995, 26 (2): 161-171.
Haukioja A, Ihalin R, Loimaranta V, Lenander M, Tenovuo J (Septemba 2004). “Ihe nrịba ama nke Helicobacter pylori na usoro nchekwa ebumpụta ụwa, usoro lactoperoxidase, na ntanetị na asọ mmadụ niile”. Journal of Medical Microbiology. 53 (Pt 9): 855-60.
2. Gịnị bụ Lactoperoxidase?
6.Ọ nwere ahụike na ahụike mmadụ na anụmanụ?